Ny fanasana lehiben'i Belsazara (Dan. 51-4)
Vakio ny Dan. 5:1-4. Rehefa izay dia vakio ny Dan. 1:1,2. Inona no ataon'i Belsazara ao amin'ny Dan. 5 izay tena ratsy tokoa? Ahoana no anehoan'izany ny tena toetrany? Ampitahao amin'ilay vehivavy ao amin'ny Apok. 17:4-6 ny fihetsiny. Inona no itovian'i Belsazara amin'io vehivavy io?
Nogiazan'ny mpanjaka Nebokadnezara ireo kapoaka volamena sy volafotsy tao amin'ny tempolin'Andriamanitra tany Jerosalema. Naneho fanajana ireo fanak'Andriamanitra ireo ihany anefa izy ka napetrany tao amin'ny tempolin'ny andriamaniny izany. Tsy mba nanana izany fanajana izany kosa i Belsazara zafikeliny. Nanome baiko ny hitondrana ireo kapoaka ireo ho eo amin'ny lanonany tokoa mantsy izy, ka tamin'izany no nampisotroany divay ireo olona nasainy. Tarnin'izany no namadihany, tamin'ny fomba manazimbazimba indrindra, ireo fanaka masina ireo ho fitaovam-pisotroana divay.
Raha teo am-pisotroana divay tamin'ireo fanaka masina izy ireo, ireo mpanolotsain'i Belsazara dia "nankalaza ny andriamanitra volamena sy volafotsy sy varahina sy vy sy hazo ary vato" - Dan. 5:4. Hitanao ve fa vita amin'ny materialy anankienina ny andriamaniny? Nanan-danja ho an'ny Babilônianina ny isa enina. Isain'izy ireo tsifolofolo ny zavatra rehetra, ka isainy hatramin'ny enimpolo izany; izany hoe ny isa enimpolo no isa ambony indrindra. Averiny indray ny fanisana raha toa ka to hanisa ambony kokoa noho izany izy. Koa isa tena niavaka tany Babilôna ny isa enina. Noho izany, ireo karazan'andriamanitra enina dia nitaratra ny fahafenoan'ny andriamanitra babilônianina. Asehon'izany koa, araka izany, fa nihevitra ny Babilônianina fa tonga lafatra ny fivavahany. Mahagaga tokoa fa ny filaharan'ireo materialy eto dia manaraka ny filaharan'ireo singan-javatra ao amin'ny sariolona ao amin'ny Dan. 2. Zavatra anankiray ihany no hafa amin'izany: vita amin'ny hazo ny andriamanitra babilônianina fa tsy amin'ny tanimanga. Ankoatra izay, amin'ny farany no ankalazan'ny Babilônianina ny andriamaniny vato. Amin'ny farany koa no ahitana vato ao amin'ilay nofin'i Nebôkadnezara. Anehoana ny fahefan'Andriamanitra izany vato izany ao amin'ny Dan. 2. Maneho amintsika izany fa hitsara ny fanjakana rehetra eto an-tany Andriamanitra (vakio ny Dan. 2:44,45), ary ao anatin'izany i Babilona.
Asehon'ny fanasana lehiben'i Belsazara ny zavatra hiseho amin'ny andro farany, araka izay hita ao amin'ny bokin'ny Apôkalipsy, izay anehoana an'i Babilôna amin'ny andro farany ho tahaka ny vehivavy (Apok. 17). Mitondra tena tahaka an'i Belsazara izy, izany hoe mihazona kapoaka volamena feno divay, ka manolotra izany ho an'ny firenena rehetra. Ny divay dia sary an'ohatra anehoana ireo fampianaran-disony sy ny fivavahany sandoka. Amin'izany no itarihan'i Babilona amin'ny andro farany izao tontolo izao ho amin'ny faharatsiana (Apok. 17:4-6). Mitondra tena tahaka ny hoe tsy miraharaha ny fitsaran'Andriamanitra izay hilatsaka aminy tsy ho ela mihitsy izy. Ho tonga tokoa anefa ny fitsarana indray andro any.